Torolàlana feno momba ny fampiasana LinkedIn Navigator | Martech Zone
LinkedIn dia nanova ny fomba ifandraisan'ny orinasa. Araraoty tsara ity sehatra ity amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fitaovany Sales Navigator.
Ireo orinasa amin'izao fotoana izao, na firy na firy na kely, dia miankina amin'ny LinkedIn amin'ny fandraisana olona manerana an'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny mpampiasa 720 tapitrisa mahery, ity sehatra ity dia mitombo isan'andro amin'ny habe sy ny sandany. Ankoatry ny fandraisana mpiasa, LinkedIn dia laharam-pahamehana indrindra ho an'ireo mpivarotra maniry ny hanatsara ny lalao marketing nomerika. Manomboka amin'ny famoronana fifandraisana amin'ny famoronana fitarihana sy famoronana sanda marika tsara kokoa, ireo mpivarotra dia mihevitra ny LinkedIn ho fanampin-javatra tsy manam-bola amin'ny ankapobeny barotra tetika.
LinkedIn Ho an'ny B2B Marketing
Ankoatra ny zavatra hafa, LinkedIn dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny marketing B2B. Miaraka amin'ny orinasa efa ho 700 tapitrisa avy amin'ny firenena 200+ eto amin'ity sehatra ity, dia loharanom-pahalalana sarobidy tokoa izy io ho an'ny orinasa B2B. Mampiseho izany ny fandinihana iray 94% amin'ny mpivarotra B2B mampiasa LinkedIn hizara ny atiny. Ny mpanorina sy ny CEO an'ny orinasa B2B dia manandrana tonga Mpanan-kery ao amin'ny LinkedIn amin'ny alàlan'ny fananganana ny marika amoron-dry zareo amin'ny alàlan'ny lahatsoratra fitantarana mba hampitomboana ny fambolena voajanahary, hanatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika, ary vokatr'izany, hampitombo ny varotra.
Tsy ao ambadiky ny solontenan'ny mpivarotra fa manangana fantsom-pivarotana ao amin'ny LinkedIn izy ireo izay mitarika amin'ny famokarana avo kokoa. Sales Navigator, fitaovana iray namboarin'i LinkedIn hametrahana ity dingana ity amin'ny dingana manaraka. Ny LinkedIn Sales Navigator dia mitovy amin'ny kinova manokana an'ny LinkedIn mihitsy. Na dia efa mandaitra amin'ny varotra sosialy aza ny LinkedIn, ny Sales Navigator dia manolotra fisehoan-javatra maro hafa hahafahanao mahita vinavina haingana kokoa ao amin'ny faritra misy anao.
Raha tsy misy resaka intsony, ity misy toro-lalana haingana hanampy anao hanomboka amin'ity fitaovana ity.
Inona no atao hoe Navigator an'ny varotra LinkedIn?
LinkedIn Sales Navigator dia fitaovana fivarotana sosialy izay manamora kokoa ho anao ny mahita vinavina mifandraika amin'ny orinasanao. Izy io dia amin'ny alàlan'ny fanolorana safidy fanivanana lalina mifototra amin'ny antsipirian'ny mpampiasa izay ahafahanao mihazakazaka mitady fikarohana mandroso mahita ny vinavinany ilainao.
Amin'ny fampiasana Sales Navigator, ny solontenan'ny mpivarotra dia mitady amin'ny alàlan'ny torolàlana lehibe, manara-maso ny hetsika ataon'izy ireo ary mitady fifandraisana mitovy amin'izany izay azony ifandraisana. Izany dia ahafahan'izy ireo manao dingana mialoha amin'ny lalao ataon'izy ireo amin'ny alàlan'ny fananganana fantsom-pandrosoana mahomby mba hiteraka varotra tsara kokoa.
Asa fivarotana maoderina (ary tianay izany). Ireo mpampiasa Sales Navigator dia miaina fisondrotana + 7% amin'ny taha-pandresena amin'ireo hetsika fivarotana maoderina.
Alohan'ny hidiranao amin'ny fampiasana dia andao jerena raha natao ho anao na tsia ny Navigator.
Iza no tokony hampiasanao ny mpivarotra varotra LinkedIn?
LinkedIn Sales Navigator no tena ilainao raha toa ianao ka mpivarotra B2B.
Ny Sales Navigator dia vokatra misy vidiny ho an'ny rehetra ao amin'ny LinkedIn. Mety tsy hitovy ny famandrihana. Azonao atao ny misafidy modely famandrihana olona, ​​ekipa na orinasa arakaraka ny filanao sy ny haben'ny orinasanao.
Ny LinkedIn Sales Navigator dia mamela antsika hahita ireo tompona orinasa ao amin'ny fikambanana ary manatona azy ireo alohan'ny hijeren'izy ireo ireo vokatra enina samihafa mba hahatonga azy ireo hahita ny olany amin'ny fomba hafa ary hahatakatra amin'ny farany fa tena misy vahaolana tsara indrindra.
Fantaro ny fomba nampiasan'ny Hyland, Akamai Technologies, ary Guardian ny LinkedIn Sales Navigator amin'ny varotra sosialy.
Ahoana ny fampiasana LinkedIn Navigator
Manomboka amin'ny fototr'asan'ny Sales Navigator ka hatramin'ny fampiasana tombony be indrindra amin'ity fitaovana ity amin'ny taona 2020, nasainay nifantoka tamin'ny lafiny rehetra ianao. Ity no fomba hanombohanao hatramin'ny voalohany.
1. Atombohy ny fitsapana maimaimpoana anao
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mankany amin'ny Pejy mpivarotra varotra ary tsindrio ny Atombohy ny fitsapana maimaimpoana anao safidy. LinkedIn mamela anao hampiasa Sales Navigator maimaim-poana mandritra ny 30 andro. Noho izany, alao antoka fa manararaotra izany amin'ny volana voalohany ianao.
Mila manome ny mombamomba ny carte de crédit anao ianao hisoratra anarana amin'ity tolotra ity. Ho fanampin'izay, tsy ho voaloa na inona na inona ianao raha manafoana ny famandrihana alohan'ny faran'ny fotoam-pitsarana.
Hoentina mankany amin'ny tranokala Sales Navigator ianao avy eo, ary sehatra hafa io. Na inona na inona ataonao eto dia tsy hisy fiatraikany amin'ny kaontinao LinkedIn mahazatra.
2. Atsangano ny kaontinao
Raha vao misoratra anarana amin'ny kaonty ianao dia mila mametraka ny safidinao mifanaraka amin'izany.
Azonao atao ny manavaka ny kaonty Sales Navigator anao amin'ny fananganana preferences toy ny lohatenin'ny asa, ny zoro ary ny faritra tianao hokendrena.
Amin'ny voalohany, ny Sales Navigator dia hanome anao safidy hitahiry ireo fifandraisana LinkedIn misy anao ho mpitarika. Ho fanampin'izany, azonao atao koa ny mampifangaro ny Sales Navigator amin'ny Salesforce na Microsoft Dynamics 365 mba hanafarana ny fifandraisana sy ny kaontinao rehetra. Misy safidy maro hafa koa ampidiro amin'ny rindrambaiko hafa ny LinkedIn raha mampiasa CRM hafa ianao.
Amin'izao fotoana izao dia vita amin'ny ampahany voalohany amin'ny fametrahana ny kaontinao ianao. Azonao atao izao ny mijery sy mitahiry ny soso-kevitra omen'ny Sales Navigator. Ny fitehirizana orinasa ao amin'ny kaontinao dia ahafahanao manaraka fanavaozana, manara-maso fitarihana vaovao ary mahazo vaovao momba ny orinasa.
Mahatonga anao hahalala tsara izany alohan'ny resaka voalohany amin'ny mety ho mpanjifa. Na izany aza, raha mbola tsy azonao antoka izay orinasa hotehirizina dia azonao atao ny mandingana an'io ampahany io ary manampy azy ireo avy eo.
Farany, mila mameno ny fampahalalana momba ny karazana fitarihana tadiavinao ianao. Ho an'ity dia azonao atao ny mampiditra fampahalalana momba ny faritra fivarotanao, ny tombotsoan'ny indostria ary ny asanao izay kendrenao.
3. Mitadiava mitarika sy vinavina
Ny zavatra manaraka tokony hataonao raha vantany vao vitao amin'ny safidinao ny kaonty dia mitady ny vinavina ary manangana lisitra firaka. Fomba tsotra hanaovana an'io dia ny fampiasana Lead Builder - fitaovana ao anatin'ny Sales Navigator izay manolotra sivana fikarohana mandroso. Ho an'izay mampiasa Sales Navigator, ny fahalalana ny fampiasana ny Lead Builder dia dingana iray lehibe.
Mba hanadio ny masonkarena tadiavinao dia azonao atao ny mikaroka lohanteny asa na orinasa manokana. Rehefa vitanao ny mametraka ny fari-pikarohanao, kitiho ny safidin'ny Fikarohana hahitana ny valiny. Sales Navigator dia hanome anao angona bebe kokoa amin'ny valiny noho izay ho hitanao ao amin'ny kinova LinkedIn.
Eo anilan'ny valiny rehetra dia hahita a Mitsitsia toy ny mitarika safidy. Azonao atao ny mampiasa an'io mba hamonjy ny vina aman-draharaha mifanaraka aminy. Tadiavo tsara ny vinavinanao fa tsy mifidy olona sendra ny ramanavy.
Ny dingana manaraka dia ny mitahiry fitarihana kaonty. Eto, kaonty jereo ireo orinasa tianao harahina haharaka ny fivoarana farany.
Amin'ny lafiny ankavanan'ny pejy dia hahita safidy fanivanana marobe ianao, ao anatin'izany ny indostria, fanendrena, anarana voalohany sy anarana farany, kaodim-paositra, haben'ny orinasa, haavo antitra ary traikefa an-taonany maro.
Ho fanampin'izany, ny Sales Navigator dia manome endrika antsoina hoe TeamLink. Afaka mampiasa TeamLink ianao hanivanana ny valiny hahitanao ny fifandraisan'ny ekipa na ekipa. Raha mahatsikaritra ny fifandraisan'ny TeamLink anao manokana amin'ny vinavinanao sy ny mpikambana ao amin'ny ekipa ianao dia azonao atao ny mangataka fampifandraisana anao. Ary farany, aorian'ny ampidiranao ny vina aman-jery ho mpitarika dia ho afaka hijery azy ireo eo amin'ny kiheba Leads.
4. Sivana ny varotra varotra
Ao amin'ny pejin'ny fikirakirana momba ny mombamomba ny mpivarotra varotra dia ho hitanao eo afovoany ny safidin'ny varotra. Avy eto, azonao atao ny manenjana ny lisitry ny mpanjifa tsara indrindra mifototra amin'ny indostria, jeografia, asa ary ny haben'ny orinasa.
Hiseho ireo preferences ireo isaky ny mijery ny mombamomba ny prospect ianao. Ary ny LinkedIn koa dia hanoro anao ny tolo-kevitra momba ny fitarihana mifototra amin'ny safidinao apetrakao.
Izy io no fomba fiasa mahomby indrindra amin'ny Sales Navigator. Azonao atao ihany koa ny mitady fikarohana mandroso na amin'ny fitarika na amin'ny kaonty. Misy sivana fikarohana mihoatra ny 20 azonao ampiharina amin'ny karoka nataonao. Anisan'izany ny teny lakile, lohateny, sahan'ny orinasa ary maro hafa.
5. Topazo maso ireo fitehirizana voavonjy anao
Ao amin'ny pejy fandraisana an'ny Sales Navigator, azonao atao ny manara-maso ireo fanavaozam-baovao rehetra sy ireo vaovao mifandraika amin'ny fitehirizana anao. Ny zavatra tsara momba ny Sales Navigator dia ny ahitanao fanavaozana na dia avy amin'ireo olona tsy mpifanerasera aminao aza. Amin'ireo fahitana rehetra ireo amin'ny vinavinanao dia afaka manoratra hafatra InMail tsara kokoa ianao (hafatra mivantana) hampifandray azy ireo.
Ary koa, raha te-tery ny kianjan'ny fanavaozana anao ianao dia ampiasao ireo sivana ireo eo amin'ny sisiny ankavanan'ny pejy. Ao amin'ny kiheba kaonty, ho hitanao ny lisitry ny orinasa notehirizinao. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny orinasa iray dia tsindrio ny safidy View Account. Any ianao dia afaka mahita ary manampy olona maro kokoa ary mahita ny vaovao farany momba ny orinasan'izy ireo.
Ankoatr'izay, azonao atao ny manindry ny safidin'ny 'mpiasa rehetra' hahitanao izay rehetra miasa amin'ity orinasa ity. Ity dia endri-javatra mora azo satria izy io dia ahafahanao mifandray amin'ny olona rehetra ao amin'ny orinasa amin'ny fotoana rehetra.
6. Manangana Fifandraisana
Amin'izay fotoana izay dia efa hitanao ny vinavinanao ary narahianao tamim-pahavitrihana ny fivoaran'izy ireo. Ankehitriny, ahoana no hifandraisanao amin'izy ireo?
Ny paikady tsara indrindra azonao raisina mba hifandraisana amin'ireo kaonty manan-danjao dia ny fandefasana hafatra mifandraika sy ara-potoana. Miaraka amin'ny fanampian'ny Sales Navigator, azonao atao ny manavao ny fanavaozana ny hetsika LinkedIn an'ny mpividy anao.
Azonao atao ny mahafantatra hoe rahoviana no te-hanatratra sy handefa azy ireo InMails. Manamboara hafatra sy mamorona modely amin'ny fomba izay manasa fifanakalozan-kevitra mahomby. Ary izany indrindra no karazana paikady fananganana fifandraisana izay manokatra ny lalanao mankany amin'ny fahombiazan'ny fivarotana sosialy.
Na izany aza, ny LinkedIn Sales Navigator dia manana fatiantoka kely iray. Mila manantona tanana ny iray amin'ireo fitarihana anao amin'ny tanana ianao. Mety handany fotoana be izany.
Fomba iray hisorohana ity asa fandoavan-ketra ity ny mandeha ho azy ny fizotran'ny fandefasan-kafatra. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fitaovana automatique LinkedIn.
Mariho fa tsy ny fitaovana mandeha ho azy no azo antoka. Raha tianao ny antoka sy ny fahombiazany azo antoka, dia tsara indrindra no safidinao Expandi ho an'ny fizotranao mandeha amin'ny varotra sosialy. Expandi dia miantoka ny fiarovana ny kaontinao amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fetra fiarovana anatiny ho an'ny fanaraha-maso sy ny fangatahana fifandraisana, fandefasana hafatra ao anatin'ny ora fiasana efa voalahatra, ary ny fanesorana ireo fanasana mihantona miaraka amina tsindry iray fotsiny
Fantatray fa ny fivarotana ara-tsosialy sy ny fikarohana dia mety ho mavesatra tokoa raha tsy mampiasa fitaovana mety na loharano faran'izay tsara ianao. Ny fampiasana sehatra toa ny LinkedIn Sales Navigator dia ahafahanao manangana lisitry ny vinavinam-bokatra be dia be ary koa amin'ny ezaka faran'izay kely. Azonao atao ny mandray an'io lisitra io ary manafatra izany ao amin'ny Expandi, izay hanatanteraka ny ankamaroan'ny asanao mandany fotoana ho anao.
7. Manararaotra ny fahitana avy amin'ny Navigator amin'ny varotra
Misy lafin-javatra marobe ao amin'ny Sales Navigator azonao ampiasaina amin'ny fampiasana tsara raha fantatrao ny fampiasana azy ireo tsara. Ohatra, raha mila fitarihana vaovao ianao, ny Sales Navigator dia mety hanolotra fitarihana mifototra amin'ny mombamomba anao sy ny fampiasana anao.
Averina indray, raha manana fitarihana mahavelom-panantenana ianao nefa manana fikolokoloana avo lenta, ny Sales Navigator dia mamela anao hanome naoty sy marika amin'ny mombamomba ny mpanjifa. Izy io koa dia mifandrindra amin'ny CRM anao.
Ankoatr'izay, raha liana amin'ny marketing LinkedIn miditra ianao dia hanome anao fahitana mivelatra ny Sales Navigator. Azonao atao ny mijery hoe iza no nahita ny piraofilinao vao tsy ela akory izay. Amin'izay dia ho fantatrao hoe iza no efa liana aminao sy ny fikambanana misy anao.
8. Tombontsoa ho an'ny Prospect
Ao amin'ny LinkedIn, ireo prospect izay mameno ny Interests ny ampahany amin'ny mombamomba azy ireo dia tena manome tombony lehibe anao. Noho io antony io, manome anao lisitry ny lohahevitra azonao ampiasaina izy ireo:
Dinika ifotony hahalalana bebe kokoa ny momba azy sy ny laharam-pahamehany
Sarintany an-dàlana momba ny fomba ahafahan'ny orinasanao sy ny vokany mamaly ny filany
Ny fahafantarana ny zavatra tadiavin'ny bitranao sy ny fahatakarana ny fomba hanomezan'ny vokatrao azy ireo ny sanda tadiavin'izy ireo dia fomba mahavariana. Izy io dia hanome anao tanana ambony goavana amin'ireo mpifaninana izay tsy miraharaha firy hanokana ny fomba fihevitr'izy ireo amin'ny fitarihany.
9. Manampia Fanitarana Navigator Sales amin'ny Chrome
Fetsy tsotra mamonjy fotoana sy hery be dia be io aminao. Fanitarana Chrome an'ny Navigator mpivarotra mamela anao hahita ny mombamomba ny LinkedIn avy ao anaty kaonty Gmail anao. Ho fanampin'izany, ity fanitarana ity dia afaka mitarika anao amin'ny lohahevitra mpamaky ranomandry, mitahiry fitarihana ho anao ary mampiseho aminao ny angon-drakitra TeamLink.
Raha mamaky hatreto ianao dia mety misy fanontaniana iray mety hapetrakao:
Mendrika ny volanao ve ny LinkedIn Sales Navigator?
Mamaly fohifohy, eny, izany tokoa. Na dia tokony hanandrana aloha ny kinova maimaimpoana aza ireo orinasam-pandraharahana madinidinika sy fivarotana mba hahitana raha toa ka tokony hampiasa vola amin'izao fotoana izao, ny orinasa lehibe kokoa dia tokony hampiasa an'io sehatra io ho an'ny fantsom-pivarotana tsara kokoa sy ny fizotran'ny asa mahomby kokoa.
Demo momba ny varotra varotra LinkedIn Expande LinkedIn Automation
Tags: b2bb2b marketingexpandimahita fitarihanamahita fitarihana sy vinavinamahita fitarihana amin'ny Internetmahita vinavinaLinkedInNavigator mpivarotradinamika microsoft 365mpivarotra fivarotanasalesforce